Ịkwụsị porn na-eji ihe ntanetịime 3-nzọụkwụ gị Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Na-agbagharị Porn Ihe ngbanwe uzo nleghachi anya nke Reward Foundation
Ndị otu na wardgwọ Ọrụ hasgwọ ahụ ewepụtala usoro mgbake atọ iji dozie nsogbu nke iji nsogbu ịntanetị. Ọ bụ ụzọ kwụ ọtọ iji kwụsị iji egwu egwu ma merie ahụ riri ahụ ma ọ bụ iji ike eme ihe. Iweghachite bụ ihe dị mkpa banyere ikwe ka ụbụrụ gwọọ gị site na ịba ụba nke wuru ihe karịrị ọnwa ma ọ bụ afọ. Ọ bụ usoro dabere na nyocha banyere ụzọ mmụta mmụta na ahụ riri ahụ si arụ ọrụ na ụbụrụ. Nwere ike ịnwale aro ndị a ebe a site na enyemaka nke obodo ndị na-achọghị ịntanetị na mgbake dị ka nofap.com or rebootnation.org. May nwere ike ikpebi na ị na-ahọrọ ndụ n'ezie mgbake obodo dị ka a 12 nzọụkwụ usoro. N'aka nke ọzọ, onye na-agwọ ọrịa a zụrụ azụ n'omume mmekọahụ na-emerụ ahụ nwere ike izute mkpa gị ma ọ bụ onye nchịkwa mgbake.
Ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na-amalite ugbu a ịmụ banyere nrụrụ erectile na-akpali agụụ mmekọahụ na nsogbu ndị ọzọ metụtara porn dị ka ịda mbà n'obi ma ọ bụ nchekasị. Gbalisie ike na ha ga-enyocha weebụsaịtị a ma obu yourbrainonporn.com. A na-azụ ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na akparamaagwa na-amụghị banyere ụbụrụ ụbụrụ na ụdị ọhụụ riri ahụ. Ighaghari ụbụrụ gi ka ị ghara ịkpa agwa ma wepụta usoro ọhụụ adịghị mfe. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ga-eme ka ndụ gị ka mma. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na-ekwu maka "ịmaliteghachi" ụbụrụ ha. Dị ka anyị nwere ike iji kọmpụta mechie mgbe ọtụtụ windo mepere. Mgbanwe ndị a ma ọ bụ Akaghachị akụkọ site na ọtụtụ puku ndị na-eto eto na-egosi otu esi eme ya.
Prinkpụrụ nke Model Iweghachite
Ndị a bụ ụkpụrụ atọ dị mfe:
Kwụsị iji porn.
Mụta nkà ndụ ndụ.
Nzọụkwụ 1 - Kwụsị iji porn
Iweghachite nwere ike ịmalite n'ezie mgbe mmadụ kpebiri ịkwụsị ile anya na ịkwụsị fantasizing banyere porn.
Iji nwee mkpali iji gbalịa ịkwụsị ịṅụ porn ịntanetị, onye ọrụ kwesịrị ịghọta na ọ nwere ike ịkpata nsogbu ahụike na ahụike dị njọ na ndị mmadụ. O nwedịrị ike ime ka ọ bụrụ ndị omempụ. Lee Otu esi amata nsogbu na porn.
N'elu Ụgwọ Ụgwọ ahụ, anyị ji okwu ahụ bụ "wepụ iko ahụ n'ime ọnya ahụ". Onye ọ bụla na-aghọta na ọnya agaghị enwe ike ịmalite ịgwọ mgbe obere iko ahụ ka dị n'anụ ahụ, na-emerụ ahụ. Ya mere, iwepụ ihe nrụgide nke mmekọrịta na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na-eme ka ụbụrụ maliteghachi. Ọ nwere ike ịgwọ ma gbanweeghachi na ọkwa nkịtị.
Malite na mkpebi ịhapụ ya. Nwere ike iji usoro a nwalere wee nwalee nke precommitment edepụtara na nke a research akwụkwọ. Ọ bụ banyere mmachi afọ ofufo ịnweta ọnwụnwa, ma na-arụ ọrụ nke ọma na ndị mmadụ na-enweghị isi. Setịpụ onwe gị iche nke 1 ụbọchị. Ebumnuche bụ ịmalite ịghọta akara nke ahụ anyị ma mụta nke ọma otu esi azaghachi ha. Rịba ama oge ị ga-ele egwu egwu n'ụbọchị. Kedu ihe 'gbaa ume'ile ya ka odi ka? Nke a bụ mmetụta ịlụ ọgụ na ụbụrụ. Ọ bụ ọchịchọ inweta ihe ụtọ neurochemicals iji zere ahụ erughị ala nke ịnọ na-enweghị ha. Ọ na-asọ mpi n'ọchịchọ nke igosipụta na anyị nwere ike ijide onwe anyị. Ọchịchọ ahụ bụ ịdọ aka ná ntị nke obere dopamine ma ọ bụ obere opioids na ụbụrụ. Ọ na-egosiputa mmalite nke mmeghachi omume nrụgide site na mkpali nke adrenaline na-akpali anyị ka anyị "mee ihe ugbu a!". Agbanyeghị, anyị nwere ikike ịchịkwa agụụ ndị ahụ ma ghara ịza ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ụzọ tupu anyị amara na n'oge ụfọdụ anyị adịghị ike.
Inwe ike ịkwụsịtụ oge ole na ole itinye na brek nke uche ma chee tupu ịme ihe na-enyere aka belata ụzọ ahụ wee bido ịkwụsị omume ahụ. Ọ bụ ihe omumu bara uru n'ịgbalị ịkwụsị omume ọ bụla anyị na-achọghịzi. Ọ na-enyere aka ịmalite njide onwe onye. Nke ahụ bụ otu ihe dị mkpa kachasị mkpa ndụ maka ọganiihu ogologo oge. Ọ dị mkpa dị ka ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike. Mụta otú ndị ọzọ si nagide mgbe ha gbalịrị ya. Anyị niile kwesịrị ịhọrọ n'etiti ihe mgbu abụọ, ihe mgbu nke njide onwe onye ma ọ bụ ihe mgbu nke ịkwa ụta.
Ihuenyo Otu ụbọchị
Enwere ike iji nke a maka ule ma ọ bụ onye ọ bụla na-egwu egwu, mgbasa ozi mmadụ yana porn.
Nke a bụ ihe e dere n'akwụkwọ Na-eji Onwe Anyị Eme Ọnwụ: Nkwupụta ọha na eze n'oge Ọhụụ Gosi Mmekọrịta, site na N. Postman na A. Postman. (Okwu Mmalite).
“Otu prọfesọ na-eji akwụkwọ ahụ na njikọ nke nnwale ọ kpọrọ 'e-media fast.' Ruo awa iri abụọ na anọ, nwa akwụkwọ ọ bụla ga-ezere kọmputa. Mgbe ọ na-akpọsa ọrụ ahụ, ọ gwara m, pasent 90 nke nwa akwụkwọ ahụ amaara, na-eche na ọ nweghị nnukwu nsogbu. Ma mgbe ha ghọtara ihe niile ha na-aghaghị ịhapụ otu ụbọchị - ekwentị, kọmputa, Intanet, TV, redio ụgbọ ala, na ihe ndị ọzọ - “ha na-amalite ịkwa ákwá na ịsụ ude.” [ma] ha ka nwere ike ịgụ akwụkwọ. O kwetara na ọ ga-abụ ụbọchị siri ike, n'agbanyeghị na ha ga-ehi ụra ihe dị ka elekere asatọ na iri abụọ na anọ. Ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ha mebie ngwa ngwa-ọ bụrụ na ha aza ekwentị, sị, ma ọ bụ naanị nyocha email-ha ga-ebido n'isi. Prọfesọ ahụ kwuru, sị: “Akwụkwọ ndị m nwetara dị ịtụnanya.
“Ha nwere utu aha ndị dị ka 'Wobọchị Kasị Njọ nke Ndụ M' ma ọ bụ 'Ahụmahụ Kacha Mma M Nwetụworo,' na-adịkarị gabiga ókè. Ha ga-ede, 'Echere m na m ga-anwụ. 'Agara m ịgbanye TV ma ọ bụrụ na m mee, achọpụtara m, Chineke m, m ga-amaliteghachi.' Mụ akwụkwọ ọ bụla nwere adịghị ike nke ya — maka ụfọdụ ọ bụ TV, ụfọdụ ekwe ntị, ụfọdụ ịntanetị ma ọ bụ PDA ha. Ma n’agbanyeghi oke asị ha kpọrọ ịhapụ ịingụ, maọbụ etu o siri sie ike ịnụ ụda ekwentị ma ghara ịza ya, ha na-ewepụta oge iji mee ihe ha na-emebeghị kemgbe ọtụtụ afọ.
N'ezie, ha na-aga n'okporo ámá ịga leta enyi ha. Ha emeela mkparịta ụka. Otu onye dere, sị, 'Echere m ime ihe m na-echeghị na m ga-eme.' Ahụmahụ ahụ gbanwere ha. Ọ na-emetụta ụfọdụ ndị nke na ha kpebiri ibu ọnụ n’onwe ha, otu ụbọchị n’ọnwa. N'ime usoro ọmụmụ ahụ, a na m ewere ha site na mgbe ochie - site na Plato na Aristotle ruo taa — na afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ụmụ akwụkwọ gara aga na-ede akwụkwọ ma ọ bụ na-akpọ gị ka m wee kelee gị, ihe ha na-echeta bụ usoro mgbasa ozi ngwa ngwa. ”
Nwa onye dere akwụkwọ a ugbu a na nke iri abụọ ya kwuru, sị:
“Enwere ike ịjụ ajụjụ ya banyere teknụzụ niile na mgbasa ozi. Gịnị na-eme anyị ma ọ bụrụ na anyị enwee ịhụnanya nzuzu ma mesịa duhie anyị? Ha na-ahapụ anyị ka ọ bụ tụọ anyị mkpọrọ? Ha na-emezi ma ọ bụ wedaa ọchịchị onye kwuo uche ya? Hà na-eme ka ndị ndu anyị nwee ike ịza ajụjụ ka ọ bụ obere karịa? Ndi sistemu anyi karie ma obu pere mpe? Hà na-eme anyị ezigbo ụmụ amaala ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa ka mma? Ndị ahịa ahụ ọ bara uru? Ọ bụrụ na ha abaghị uru, mana anyị enweghị ike igbochi onwe anyị ịnakwere ihe ọhụrụ na-esote n'ihi na ọ bụ naanị otu anyị si etinye ya, kedụ usoro anyị ga-eche iji jigide njikwa? Ebube? Gịnị ka ọ pụtara? ” Lee nke anyi akụkọ akụkọ na otu otu ụmụ akwụkwọ isii nke ụmụ akwụkwọ na Edinburgh jisiri ike mgbe anyị mere ngwa ngwa ngwa 24.
Iji ike egwu egwu egwu?
Gbalịa nke a iji nyochaa ma ọ bụrụ na mmadụ na-eji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị eme ihe.
Ọ bụrụ na onye ị maara ma ọ bụ gị onwe gị, chọrọ ịnwale ule mkpochapu ụbọchị a maka naanị ihe nkiri ịntanetị, ọ bara uru. Ọ bụrụ na ị ga-aga nke ọma, ị nwere ike ịnwa ịgbatị iwepu mkpochapụ ahụ ogologo oge. Ọ nwere ike ịdị mfe ịhapụ omume maka awa 24, mana otu izu ma ọ bụ izu atọ bụ ezigbo ule nke otu omume siri ike.
Ntugharia nwere ike ịmalite nke nta ngwa. Oge awa mbụ, ụbọchị mbụ na izu mbụ bụ mgbe ndị na-agbapụtaghachi na-agbakarị enweghị ike imeri ọchịchọ ahụ na-ele ụfọdụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị zụrụ ụbụrụ gị na porn ruo ogologo oge, ọ ga-ewe oge tupu ị na-ebi ndụ na-enweghị mmekọahụ. Nleghachi anya abụghị usoro dị mfe. Ọ bụrụ na ịchọta ya dị mfe, dị nnọọ na-ekele. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ya ihe ịma aka. Otú ọ dị a dọrọ aka ná ntị, a na-atụ anya ya. Ịmara banyere ihe mgbaàmà uche ma ọ bụ nke anụ ahụ ndị ọzọ na-agbapụtaghachi na ụzọ ha na-agbakeghachi bụ enyemaka dị ukwuu.
Na-akwụsị ịkụda ala
Naanị igbutu (mbelata nsogbu) anaghị arụ ọrụ n'ọtụtụ agwa ike. Chọta ụzọ iji kwụsị iji porn abụghị ihe ọzọ. Ozugbo anyị nwere nrụgide, ma nweta nke ahụ 'mee ihe ugbu a!' Mmetụta, ịnweta mmetụ dị mfe nke kemikal sitere na ama ma ọ bụ mbadamba nwere ike ịdị oke adaba. Naanị ibelata oriri porn ezughị ọtụtụ ndị mmadụ, ọ na-eme ka omume ahụ dịkwuo ogologo. Pathzọ ndị a zụlitere n'ụzọ dị mma na-achị kwa ngwa ngwa. Ọ nwere ike were ọnwa, ọbụlagodi ọtụtụ afọ na ụfọdụ isi ike, na-etolite ụzọ ahụike ọhụrụ ma ghara ịlaghachi azụ. Ọ nwekwara ike were ọtụtụ mbọ nke nnwale na njehie iji jigide omume nke ịdọpụ uche anyị na-ele egwu porn, ogologo oge. Ya mere, chee echiche banyere ndị a:
Kwụsị ikiri internet porn
Mụta iji internet na-enweghị porn
Nzọụkwụ 12, iweghachite SMART na enyemaka enyemaka nwere ike inyere aka
Mụta otú usoro nkwụghachi ụgwọ nke ụbụrụ na-arụ ọrụ. Ịghọta na nrụgide a bụ ụbụrụ ụbụrụ dysregulated na-enyere aka mee ka ọ dị mfe
Mụta ihe ndị na - emepụta na ihe ndị na - ewepụ ụbụrụ gị. Chọta ụzọ iji zere ha
Kwụ na 2kwụ XNUMX - zụọ uche
Ọtụtụ ndị na-abata abamuru na-erite uru site na nkwado ụfọdụ. Nke a nwere ike ịbịa site na ndị enyi na ezinụlọ ma ọ bụ site na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ dị ka ndị na-agwọ ọrịa. Nke a bụ ebe ịhụnanya dị n 'ụbụrụ, nkedo, ọbụbụenyi, ntụkwasị obi na ijikọta ihe niile nwere ike ime ka ụbụrụ na-ekpo ọkụ na ụbụrụ dị na ụbụrụ. Oxytocin nwere ọtụtụ aka enyere aka iji mee ka ọkụ eletrik na ihe ndị na-adịghị na ya na-emepụta:
Ntughari cortisol (nrụgide na ịda mbà n'obi) na dopamine (cravings)
Na-ebelata mgbaàmà ịpụ
Na-eme ka mmekọrịta na nchebe dị ike
Nwee mmetụta nke nchegbu, egwu na nchegbu
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji wulite ume nke nrụgide na nsogbu nke ndụ kwa ụbọchị bụ izu ike miri emi, miri emi. Otu nsụgharị nke ewu ewu taa bụ Mindfulness. Ọ pụtara iji nlezianya na-a feelinga ntị n'ihe ọ bụla anyị na-enwe ma ọ bụ na-eche maka obere oge na-enweghị ikpe. Kama igbochi ma ọ bụ gbalịa ileghara echiche anyị na-akpata nchekasị anya ma ọ bụ iwepụta oge iji mesoo ha, anyị na-ekwe ka ha bata n'ime uche anyị ma lelee ha anya na-enweghị ịnwale ileghara ha anya ma ọ bụ dozie ha ma ọ bụ ọbụna ikpe ha ikpe n'ụzọ siri ike.
Ngwakọta dị irè nke usoro nkwado nwere ike inyere aka. Ọtụtụ na-ebuli ọkwa ikuku anyị.
Uche na-arụ ọrụ nke ọma na Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Ebe CBT na-arụ ọrụ na ọkwa, ọgụgụ isi iji gbanwee omume adịghị mma nke echiche na nghọta, ntụgharị uche na-arụ ọrụ na omimi adịghị ama, na-abụghị ọnụ.
Mkparịta ụka na-akpali akpali (MI) egosikwa na ọ bara uru iji nyere ndị na-eto eto ọgwụ ọgwụ aka ịghọ ndị na-enweghị isi site n'ịgba ume nghọta.
Mbelata usoro nchekasị nke uche
MRI nyochaa gosiri ihe isi awọ (mkpụrụ ndụ nerve) na amygdala (nchegbu)
Enwekwu okwu isi awọ na hippocampus - icheta na mmụta
Nweta uru bara uru nke na-aga n'ihu n'ụbọchị
Mbelata a na-ekwu na nrụgide
Ntughari ntụgharị uche efu
Mgbagwoju anya efu
jiri anyị ememe ntụrụndụ miri emi iji nyere gị aka ịkwa ahụ ma gbanwee ụbụrụ gị. Site na mbenata mmepụta nke neurochemicals, ị na-ekwe ka ahụ gị gwọọ. Uche gị nwere ike iji ike maka nghọta na echiche ọhụrụ.
Echiche a na nke atọ bụ iji mee ka uche gị dị jụụ n'egosighi ihe ịrịba ama ọ bụla nke ijegharị ahụ ka ị nwee ike ime ya na ụgbọ oloko ma ọ bụ mgbe ndị ọzọ nọ. Ọ na-ewe oge 18.13.
Kedu mgbe ị ga-eme ntụrụndụ miri emi?
Kwụ na 3kwụ XNUMX - Mụta nkà ndụ
Fọdụ ndị nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụ adịghị ike amụrụ n'ime ya nke pụtara na ha chọrọ ihe 'na-enweta ya' neurochemical, dopamine, iji nweta otu ọkwa nke ọ driveụ na obi ụtọ dị ka onye na-enweghị mgbanwe mkpụrụ ndụ. Ndị ahụ, obere pasent, na-adịkarị nro karịa ndị ọzọ. Otú ọ dị, n'ozuzu, ndị mmadụ na-adaba n'ime omume ike ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ riri ahụ n'ihi isi ihe abụọ.
Gịnị mere ịṅụ ọgwụ ọjọọ?
Nke mbụ ha na-amalite ịchọ ihe ụtọ na ikpori ndụ dịka ndị ọzọ mana ịgwọta oge ụfọdụ nwere ike bụrụ omume mgbe niile. A na-arata anyị niile n'ime nkwa nke 'ọchị' ọbụlagodi na nsonaazụ ahụ efunahụ ọrụ, mgbu, hangovers, agbahapụ oge, agbahapụ nkwa. Ka oge na-aga nrụgide ọha na eze na mgbasa ozi nwere ike iduga anyị n'ị usụbiga mmanya ókè na-eme ka ụbụrụ anụ ahụ gbanwee na usoro ụgwọ ọrụ anyị nke na-eme ka agụụ na-agụsi ike iguzogide. FOMO ma ọ bụ 'egwu nke ịhapụ' bụ naanị egwuregwu uche mmekọrịta anyị kwesịrị ịmara. Social media na-enyere aka ịzụlite ụdị ụbụrụ ahụ.
Addictionzọ nke abụọ ị addictionụ ọgwụ ọjọọ nwere ike isi zụlite bụ site n'ọchịchọ mmụọ na-enweghị atụ iji zere ọnọdụ na-egbu mgbu ma ọ bụ mgbalị ọ bụla kwa ụbọchị. O nwere ike ibilite n'ihi na mmadụ amụtabeghị nkà ndụ iji nagide ihe omume dịka ọnọdụ ọhụrụ, izute ndị mmadụ, esemokwu ma ọ bụ esemokwu ezinụlọ. Seekingchọ ihe ụtọ nwere ike bido belata nrụgide ma ọ bụ belata ihe mgbu, mana n'ikpeazụ ọ nwere ike bụrụ nnukwu nrụgide karịa nsogbu mbụ ahụ n'onwe ya. Ụ ọgwụ ọjọọ na-eme ka mmadụ tinye uche ya na mkpa nke onwe ya ma ọ bụghị nke mmetụta uche nye ndị ọzọ. Nchegbu na-ewuli elu ma ndụ na-adị n'elu ha, na-enweghị nchịkwa. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa na-akpali akpali dị ka ị ,ụ mmanya, mmanya na-aba n'anya, ịgba chaa chaa, nri ratụ ratụ, na egwuregwu iji kpọọ mmadụ ole na ole, na-eri anụ anyị n'ọchịchọ ịchọrọ ihe ọchị ma leghara mmetụta uche na-egbu mgbu ma ọ bụ ọnọdụ metụtara mgbalị anya.
Na-egbochi ịda mbà n'obi
Ịmụta ihe ọmụmụ ndụ na-enye aka ga-enyere aka gbanwee nke a ma wedata ohere ịdaba na ịda mbà n'obi na ahụ riri ahụ. Nanị iwepụ àgwà ahụ riri ahụ anaghị ezuru. Nzaghachi na-akpalite nrụgide ka ga-adị ebe ahụ na-ahapụ onye ahụ na-emebi emebi na enweghị ike ịnagide nkatọ ma ọ bụ esemokwu. Enwere ọtụtụ akụkọ banyere ndị mmadụ jisiri ike kwụsị ị alcoholụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ọgwụ ike wee chọta ọrụ naanị iji mebie ihe izizi nke esemokwu, wee laghachi na ya. Enwere akụkọ ọma banyere ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ na-achọta ike na ume ọhụrụ iji chee ọnọdụ ndị siri ike ihu mgbe ha kwụsịrị porn. Fọdụ na-ekwu maka itolite “mba ike”.
Ndị mmadụ na mgbake na-enwe ihe ịga nke ọma ma zere nlọghachi azụ mgbe ha mepụtara nkà ndụ iji gbasaa ma wuo ndụ ha ma mee ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-eju afọ. Ọ pụtara ịnweta njem ha na obi ụtọ ha site na isi ahụike dị mma karịchaa site na ijikọ ndị ọzọ na mmadụ na ịhapụ ihere, ikpe ọmụma na inwe mmetụta na a hụghị ha n'anya, nọpụ iche ma ọ bụ naanị.
E nwere ọtụtụ ndụ dị iche-nkà ndị a maara iji nyere aka:
Ngwá ọrụ ndụ iji wulie ahụ ike
Ịmụta iji sie nri ma na-eri nri mgbe niile
Ịna-ehi ụra zuru ezu, awa 8 n'abalị maka ndị okenye, oge 9 maka ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Omume ahụ, karịsịa na-etinye oge na okike
Omume ezumike uche - dika itinye uche na uche ma obu ime ka uche gi kpafuo
Ngwá ndụ iji wulite obi ike
Uche a na-azụghị azụ apụghị ịrụzu ihe ọ bụla. Ndikpep obufa usọ esisịt ke adiana ekeme ndinam owo enyene mbuọtidem. Ọ na-ewe oge. Uche gbatịrị agbagha agbagha laa azụ na mbụ. Ọ dịghị onye nwere ike ịnapụ anyị ihe anyị mụtara. Ọ bụrụ na anyị enwekwuo nkà, otú ahụ ka anyị ga-adịkwu ndụ n'ọnọdụ ndị na-agbanwe agbanwe. Nkà ndị a na-ebelata nrụgide nke ibi ndụ aghara
Mụta ịchịkwa echiche gị, nkwenkwe na agụụ mmekọahụ
Nhazi nhazi na ulo - nhicha na usoro ahia; idebe akwụkwọ ndị dị mkpa, ụgwọ na ọnụ ahịa na usoro
Mụta otu esi etinye akwụkwọ maka ọrụ ma dozie nke ọma maka ajụjụ ọnụ
Ike ego - ịmụ ego na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, chekwaa
Ndu nke ndu iji jikota ndi ozo site na nkwurita di nma
Ịmụta iji gosi na ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ike, na-eme ihe ike ma ọ bụ na-agafe agafe
Egwuregwu na-ege ntị ma na-eche echiche
Ngwá ọrụ njikwa nsogbu
Mkpakọrịta dị mma, dịka njikọ ezinụlọ dị iche iche
Ngw'anyị na-eme nke ọma, gbasaa ma wulite onwe anyị dị ka mmadụ zuru oke
Ịmepụta ihe iji gosipụta mmetụta uche na-emetụ n'ahụ-ịmụ abụ, ịgba egwú, kpọọ ngwá ọrụ, ese, ese, dee akụkọ
Enwe obi ụtọ, na-egwu egwuregwu, na-achị ọchị, na-ekwu njakịrị
Ọrụ afọ ofufo, inyere ndị ọzọ aka
Nke a na ibe weebụ a enyela ihe nkowa di nkpa nke ntanye ugwo n 'ugwo ugwo n' uzo 3. Anyị ga-emepụta ihe iji kwado ihe ọ bụla n'ime ọnwa ndị na-abịanụ. Ị nwere ike ịme klas na nkà ndụ ndị a n'ụlọ akwụkwọ, kọmpi ndị ntorobịa ma ọ bụ obodo gị. Lelee ha na ụlọ akwụkwọ gị ma ọ bụ n'Ịntanet.
Lee ụzọ atọ anyị dị mfe:
1 - Kwụsị iji porn
2 - Tame uche
3 - Mụta nkà ndụ dị mkpa
<< Pornga Porn Free Mmemme Mgbochi 3 TRF >>